Covid-19: Dad Lagu Aasayo Qabuuro Cusub Oo Ku Yaalla Muqdisho | Aftahan News
Covid-19: Dad Lagu Aasayo Qabuuro Cusub Oo Ku Yaalla Muqdisho
Muqdisho (Aftahanews)-kiisaska COVID19 ee Soomaaliya waxay ku sii dhaw yihiin 1000 kiis, iyadoo labadii todobaad ee lasoo dhaafay la diiwan galiyay kiisaskii Covid-19 ee ugu badnaa.
Inkastoo wali uu faafitaanka xanuunka uu jiro haddana mas’uuliyiinta magaalada Muqdisho ayaa ka digaya in tirada dadka xanuunka qabo ama u dhimanayo xanuunka ay intaas ka badan tahay.
Warihaya BBC-da ee magaalada Muqdisho Bella Sheegoow oo warbixintan Muqdisho ka soo diyaarisay ayaa sheegtay iney qabruurihi hore ee Muqdisho ay buuxsameen oo haatan dadka lagu aaso qabuuro cusub.
“Sidaad ogtihiinba markii hore ilaa iyo 450 qabri iyo wax ka agdhow ayay qabuuraha ahaan jireen laakiin bishan 558 ayey ahaayeen marka 100 baa ku korortay, waa bishi la soo dhaafay ee afaraad taasoo macnaheedu yahay maalin walba 3-4 qof ku dhawaad oo siyaada ah ayaa halkan la keenayey. Marka dadweynihi oo xawaalaha loo soo dahweeyey wey noqon kartaa dhibka jirana qayb ayuu ka yahay taa lama inkiri karo” ayuu yidhi guddoomiaha qabuuraha barakaat Cali Wehliye.